तपाईकोे साँचो माया हो कि झुटो माया गरिरहेकोछ ? यी ४ कुराले थाहा हुन्छ । – Pradesh Online Khabar
तपाईकोे साँचो माया हो कि झुटो माया गरिरहेकोछ ? यी ४ कुराले थाहा हुन्छ ।
जीबन शैली / रोचक / विचारNo Comment on तपाईकोे साँचो माया हो कि झुटो माया गरिरहेकोछ ? यी ४ कुराले थाहा हुन्छ ।
काठमाडौ । अहिलेको सूचना र प्रविधीको युगमा यो लभ भन्ने विज्ञान निकै फस्टाएको छ । किनभने अहिले बाबा आमा र आफन्तहरु गर्ने माया त छर्दै छ । तर यहा एक प्रेमी र प्रेमिकाले गर्ने माया कुरा गर्न लागिरहका छौ । जहा भनिन्छ , मायामा , जातभात ,सानोठुलो हेरिदैन् । यदि परि हालेमा एकले अर्कालाई ज्यान दिन समेत पनि पछि पदैन् । त्यसैले कतिले मायाको जालमा फसेर आत्माहत्या पनि गरेको खबर बेलाबेलमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आउछन् ।
-पहिलो सूत्र हो , के तपाईंको जीवनसाथीले सधै शारीरिक सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ । त्यसोभए यो मायामा पनि केही स्वार्थ छ भन्ने सोच्नुस् । तर माया शारिरिक सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । तर यो कहिलेकाही हुन्छ । यदि शारिरिक सम्पर्क पछि उसले तपाईलाई ध्यान दिदैन भने यो पनि एक सकेंत हो । मायामा त सबै हुनुपर्छ ।
-र अन्तिम कुरा भनेको यदि तपाई कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईको पार्टनरले त्यो कुरालाई कस्तो रुपमा लिन्छ । यदि उसले समस्याको समाधान तिर गएमा, थाहा हुन्छ कि यो साचो प्रेम हो । यदि उसले हासोको रुपमा मात्र लिन्छ भन्ने यो पक्का स्वार्थ हो । त्यसैले विचार गर्नुस् । via~medianp बाट ।
महाकाल शिवको विशेष दिन आज, यसरी गर्नुहोस पूजा लाभ मिल्नेछ
दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा पसिना : यस्तो हुन सक्ने
केही भनाइहरू: एकपटक पढ्नुहोस नत्र पछुताउनु पर्ला